R/Wasaaraha oo kulan wadatashi la qaatay Ururada Bulshada & Culimadda – AfmoNews
R/Wasaaraha oo kulan wadatashi la qaatay Ururada Bulshada & Culimadda
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan wadatashi ah oo ku addan doorashooyinka la qaatay Ururrada Bulshada Rayidka ah iyo culima’udiinka Soomaaliyeed.
Kulankan oo lagu xoojinaayey xiriirka wada shaqayneed ee Urrurada Bulshada, Culima’udiinka iyo dowladda, isla markaana looga wadatashanayay tallooyinkooda ku addan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho nabadoon.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa bulshada rayidka ah iyo culima’udiinka warbixin faah faahsan ka siiyey dadaallada xukuumadda ee ku addan qabsoomidda doorasho xasillooni, isagoo sheegay booqashooyinkii uu ku tagey Koonfur Galbeed, Puntland iyo Galmudug ujeedkoodu ahaa sidii loo xalin lahaa tabashooyinka jira.
Guddoomiyaha Ururrada bulshada rayidka ah ee SONSA Mudane Cismaan Muxyadiin Shaatax ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha ay isla meel dhigeen dhowr qodob oo saldhiggoodu yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta jawi nabdoon, iyadoo la ilaalinayo heshiisyadii siyaasadeed ee laga gaaray doorashooyinka.
Sidoo kale waxuu tilmaamay in ay la wadaageen tallooyin wax dhisaya, iskuna afgarteen in meel looga soo wada jeesto wax walba oo dhaawacaya nabadda iyo horumarka dalka.
30 Sano oo ka soo wareegatay markii xukunka laga tuuray Siyaad Barre( Warbixin Taariikheed) –
The Italian Prime Minister would stop and seek a new government amid pandemic and political unrest –
Another night of riots in the Netherlands over the curfew Covid-19 –
European Union warns AstraZeneca of delayed delivery of Covid-19 vaccine –
US Senate confirms former Fed Chairman Janet Yellen as the first woman to head the US Treasury Department –
Canadian Parliament marks US far-right Proud Boys group “a terrorist unit” –